ရွှေအ နဲ့ ရွှေဘ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ရွှေအ နဲ့ ရွှေဘ
ရွှေအ နဲ့ ရွှေဘ
Posted by ashinindaka on Jan 22, 2011 in News | 17 comments
ဒီအတွက် ပြည်ပသာသနာပြုစေလွှတ်ဖို့ စီစဉ်တယ်။
ရဟန်းတော်များကို တိုင်းဒေသကြီး ၉-ခုသို့ သာသနာပြု စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။
အရှင်သောဏနဲ့ အရှင်ဥတ္တရမထေရ်တို့ခေါင်းဆောင်တဲ့ သာသနာပြုအဖွဲ့က
သုဝဏ္ဏဘုမ္မိသို့ ကြွရောက် သာသနာပြုကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘီလူးတွေက လူတွေကို အမြဲတမ်းဝင်ရောက်နှောက်ယှက်နေတဲ့အချိန်
သာသနာပြုကြွလာတဲ့မထေရ်နှစ်ပါးက ဘီလူးဘေးရန်မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။
မထေရ်နှစ်ပါးရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုကြောင့် လူတော်တော်များများ
သုဝဏ္ဏဘူမိဆိုတာ ဘယ်နေရာက ဘာလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ
တချို့ မြန်မာရာဇ၀င် သာသနာဝင်စာအုပ်တွေထဲမှာ
မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ သထုံမြို့နေရာလို့ ရေးသားဖော်ပြကြတယ်။
သုဝဏ္ဏဘုမ္မိဆိုသည်မှာ ဆုမတြာကျွန်းဆွယ်ကို သုဝဏ္ဏဘုမ္မိ ခေါ်ဆိုကြောင်း
ရှေးက အဲ့ဒီကျွန်းဆွယ်မှာ သုမိတ္တခေါ်သော အိန္ဒိယတိုင်းသားကုန်သည်တစ်ဦး
အရင်ဆုံးလာရောက်အခြေချနေထိုင်တဲ့ သုမိတ္တဆိုသူရဲ့အမည်ကို အစွဲပြုပြီး
ပါဠိဘာသာဖြင့် သုမိတ္တ (Sumitta) သက္ကတဘာသာဖြင့် ဆုမိတြမှ ဆုမတြားလို့
ဒီဆုမတြားကျွန်းဆွယ်ကို သုဝဏ္ဏဘူမိလို့ ခေါ်ဆိုလာကြတယ်။
ရှေးက အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေ ဒီကျွန်းဆယ်ကို ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်ကိစ္စနဲ့
သူတို့အတွက် ဆုမတြားကျွန်းဆွယ်ဟာ ရွှေလို အဖိုးတန်သောနယ်မြေလို့
သတ်မှတ်လာပြီး ရွှေမြေ (သုဝဏ္ဏဘူမိ) လို့ တင်စားခေါ်ဝေါခဲ့ကြတာတဲ့။
သုဝဏ္ဏဘူမိ (ရွှေမြေဒေသ) ဟာ
အရှင်သောဏနှင့် အရှင်ဥတ္တရတို့ သာသနာပြုရောက်စဉ်က
လူတို့ ဘီလူးဘေးရန်များကို ခံစားနေကြရတယ်ဆိုတဲ့အဆိုနဲ့
ရှေးဟောင်း မွန်ရာဇ၀င်ကျမ်းများ၊ ဓမ္မစေတီမင်း၏ ကျောက်စာများမှာ
သထုံဒေသကို ရက္ခပူရ (ရေဘီလူးနိုင်ငံ)ဟု ရှေးဦးက ခေါ်ဆိုခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အဆိုနှစ်ခု
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာတို့ကတော့ ဒီနေ့
ကိုယ့်ကိုယ်ကို “ရွှေ” လို့သတ်မှတ်နေတာ တွေ့ရတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရွှေနိုင်ငံသားလို့ ပြောကြတယ်။
Golden Land ရွှေနိုင်ငံလို့ ဖော်ပြကြတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံကို လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားများက
သူတို့ကို သူတို့ ရွှေလို့ ရည်ညွှန်းပြောဆိုတာ မကြာခဏ ကြားဘူးတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ အလုပ်ရုံ၊ စက်ရုံတွေမှာ
လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ အတူတူ နေထိုင်ကြရတာ။
နိုင်ငံမတူ၊ လူမျိုးမတူ၊ ဘာသာမတူပေမဲ့
အနေနီးစပ်လို့ မေတ္တာမျှပြီး အိမ်ထောင်ကျသွားတာတွေလည်း ရှိရဲ့။
ရွှေလို့ခေါ်တဲ့ဗမာတွေနဲ့ အ လို့ခေါ်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားတွေ အိမ်ထောင်ကျပြီး
အဲ့ဒီကလေးတွေကို ‘ရွှေအ’ လေးတွေလို့ ခေါ်ကြတယ်။
ရွှေလို့ခေါ်တဲ့ဗမာတွေနဲ့ ဘ လို့ခေါ်တဲ့ ဘင်္ဂလားတွေနဲ့အိမ်ထောင်ကျလို့
‘ရွှေအ’ တွေ၊ ‘ရွှေဘ’ တွေများလာတာ ကောင်းတဲ့လက္ခဏာတော့ မဟုတ်ဘူး။
ဒီအတွက် မိဘတွေကို အပြစ်တင်ရမှာလား။
ပုဂံဒေသကို ဗာစကိုဒဂါးမား လားဘယ်သူလဲတော့ မသေခြာပါ
အဲ့သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ခရီးသွားမှတ်တမ်းမှာ စေတီပုထိုးတွေမှာ မှာ ရွှေရောင်သန်းနေတာကို
အစွဲပြုပြီး ရွှေရောင်လွှမ်းသောမြေဟု မှတ်တမ်းရှိတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်
တစ်ကယ်တမ်းမြန်မာလူမျိုးတွေကို ရွှေလို့ ခေါ်တာကတော့
ထုံးစံအတိုင်း အခြားဘဒ္ဒ န္တတွေ ဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်ဘုရား
အောင်ပုဘဒ္ဒ န္တမှ ဖြေကြားပါမည်ဘုရား။
အတော်နောက်တဲ့ ဘဒ္ဒန္တအောင်ပု၊ အဲလေ ဒကာအောင်ပု ပါလားဟေ့။
ခေါင်းပေါ်က ယားကျိကျိသတ္တဝါ သန်းနဲ့ အဖိုးတန်ရွှေကိုတွဲပြီး နာမည်မှည့်ထားသူကြီးကိုသာ အပြစ်တင် လိုက်ပါတော့ဘုရား။
သန်းဆိုတာ ခေါင်းကိုက်တဲ့ အမျိုးလေ.. ရွှေပါတော့.. သိပ်အဖိုးတန်နေတာပေါ့။
ရွှေဘ ရွှေအ ဆိုလို့ အစပိုင်း သမိုင်းချီလာတာ သိချင်စိတ်နဲ့ ဖတ်ရင်း နောက်တော့ အိမ်ထောင်သားမွေး ဇတ်လမ်း ရောက်သွားပါကကောလား။
ယိုးဒယားနိင်ငံသားကို ယပက်လက် … ဟီးး … မိုက်တရ်
ကမ္ဘာမှာတန်ဖိုးအကြီးဆုံး .. ကျောက်မျက်တခုဖြစ်တဲ့.. ပတ္တမြားထွက်တယ်..။ ကမ္ဘာမှာအထွက်ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်..။
ကမ္ဘာမှာတန်ဖိုးအကြီးဆုံး .. ကျောက်မျက်တခုဖြစ်တဲ့.. ကျောက်စိမ်းထွက်တယ်..။ ကမ္ဘာမှာအထွက်ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်..။
အဲဒါကို ..ဘယ်ကဘယ်လို.. မြန်မာလူမျိုးနစ်နိမ်းက .. ရွှေဖြစ်သွားသလည်း မသိပါဘုရာ့..။
ကြည့်ရတာ. ..ငွေကြေးကို နာမ်နှိမ်ပြီး ..ကျပ်..ပြားခေါ်..။
လူကိုအညွှန့်ချိုးပြီး. ကျွန်တော်၊ ကျွန်မလုပ်ခိုင်း..။
Burman ဆိုတဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့အနွယ်အမည်ရှိပြီးသားကို .. Burmese လို့ကျွန်စော်နံတာပြောင်းခေါ်..။
သမိုင်းပညာရှင်ကြီး ဒေါက်တာသန်းထွန်းကတော့ .. အသောကမင်းသာသနာပြုလွှတ်တဲ့ထဲ..မြန်မာပြည်မပါဖူးလို့ သုံးသတ်ထားပါတယ်.။
အဲဒါ..အဲဒါနဲ့ဆိုင်တဲ့သူတေသနကို အိန္ဒိယသွားတက်တဲ့.. မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ကအတင်းကို .. ပါကိုပါတယ်လုပ်ချပြီး အိန္ဒိယက ပြန်ခဲ့ကြတယ်တဲ့..။
တကယ်တော့ ..မြန်မာပြည်ကို .. ဗုဒ္ဓဘာသာေ၇ာက်တာ အင်မတန်နောက်ကျပါတယ်တဲ့..။
သူ့အထောက်အထားတွေအရဆို ..နှစ် ၁ဝ၀၀ လောက်ပဲ..။
ဆိုတော့ ..ပုဂံက ပုထိုးတွေက .. အိန္ဒိယက..ဟိန္ဒူပုံစံတွေဆောက်ကြတည်ကြတာပါ..။
အဲဒါမျိုးခေတ်နည်းနည်းစောတဲ့ မြို့ ကြီးတွေ ..အိန္ဒိယမှာရှိတယ်..။ တီဗီမှာတွေဖူးတယ်.။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် ..ပုဂံနဲ့ချွတ်စွတ်ပဲ..။
(ဘဒ္ဒ န္တသဂျီးမှ ဤသို့ဖြေလိုက်သည်…)
100 and 10% sure.
ကျွန်တော်တို့ အစ်ကို လိုက်တဲ့သင်္ဘောလိုင်းကတော့ တစ်စင်းလုံး မြန်မာတွေချည်းပဲမို့ တစ်ခိုင်လုံးရွှေ သင်္ဘော (အပြင်မှာ အခြားအမည် ရှိပါသည်) လို့ ခေါ် ပါကြောင်း။
ဘဒ္ဒ န္တ တွေ ၀င်ပြောဟော သွားတာ ကောင်းပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ကျန်တဲ့ ကျောက်သံ ပတ္တမြားတွေ ထွက်နေသော်လည်း လူတိုင်းမတွေ့ဖူး မမြင်ဖူး မ၀တ်ဖူးကြပါ။ ရွှေကတော့ မြင်ဖူး ၀တ်ဖူးနေကြမို့ ရွှေလို့ပဲ လွယ်လွယ် ပဲပေးလိုက်ကြပုံရပါတယ်။ ရွှေနဲ့ ကျန်တာတွေ ရောတော့ ရွှေ ရဲ့ အရည်ကျသွားတာပေါ့..။
ေ၇ွှရောင်တ၀င်းဝင်းနဲ့စေတီပုထိုးတွေ နေရာအနှံ့ တွေ့ ရသောကြောင့်
ရွှေမြန်မာ ဟု ခေါ်ဆိုသည်ဟု ထင်ပါသည်ဘုရား။
ရွှေဟုခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲမူကို မည်သည့်ပညာရှိက စခဲ့သည်မသိပါ။တပည့်တော် ၁၉၉၀-၁၉၉၁ ခုနှစ်အတွင်းမှာ သင်္ဘောသားဘ၀နှင့် စင်္ကာပူသို့ရောက်ရှိချိန်တွင်မြန်မာသင်္ဘေားများ စတင်သုံးဆွဲနေသော ဝေါဟာရ ဖြစ်ပါသည်။မည်သည့်မဟာပညာရှိက တီထွင်ခဲ့သည်ကိုတော့မသိပါ။တပည့်တော် အထင်ကတော့ သင်္ဘောပေါ်၌ မြန်မာများတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပြောဆိုဆက်ဆံရာတွင် တစ်ခြားသောနိုင်ငံခြားသားများကို ကိုယ်စားပြုသည့်နိုင်ငံများမသိစေရန်အတွက် စကားဝှက် များအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းမှ စခဲ့သည်ဟုထင်ပါသည်။မလေးရှားနိုင်င်ငံရှိ ရွှေအ၊ရွှေဘများသည် ဘာသာကူးပြောင်းသူများ အလွန်နည်းပါသည်။ဘာသာတူသူများသာပေါင်းသင်းနေထိုင်သည်ကများပါသည်။
သမိုင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကို စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးပြောတာကလည်း တစ်မျိုးသွားပါတယ်
ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်မဟုတ်တိုင်း အဂန့် န်စ်ထ် လုပ်ရင်တော့
အတ္တဝါဒီဖြစ်သွားမယ့် သဘောကို ဆောင်မယ်ထင်ပါတယ်
ယ္ခင် ပြည်ပကိုရောက်တာနဲ့ 
ရွှေ လို့ ခေါ်ကတည်းက ဘာပါလိမ့်ပေါ့
မေးမြန်းကြည့်တော့ ရှားရှားပါးပါးဖြစ်လို့ရွှေလို့ ခေါ်တာတဲ့
သထုံသုဝဏ္ဏဘူမိဒေသရဲ့ ကျဆုံးရခြင်းအကြောင်းတွေကို သုံးသပ်ကြည့်ရာကနေ
အဲ့သည်ခေတ် မွန်လူမျိုးတွေရဲ့ စိတ်ကိုသွားတွေ့ တယ် (လူမျိုးရေးအယူသည်းမှုမရှိစေရ)
ပုဂံရဲ့ အရည်းကြီးဝါဒ လွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်မှာ
ခုခေတ်နဲ့ ပြောရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားရဲ့ 
တရားတော်မှာ နေထိုင်တဲ့လူတွေဆိုပြီး သူများကို
မှိုချိုးမျှစ်ချိုးပြောပြီး ကိုယ်ကတော့ နွားဇာတ်ခင်းကြသလိုပေါ့
ဆက်စပ်ပြောရရင် အဲ့သည်ခေတ် မွန်လူမျိုးတွေက သူတို့ ကိုယ်သူတို့ 
မြင့်မြတ်တဲ့သဘောမှာထားကြတယ် ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားရဲ့တရားတော်မှာ သက်ဝင် ယုံကြည်သူတွေပေါ့
ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားရဲ့ တရားတော်မှာ ရှိတယ် သတ္တဝါရဲ့ နှလုံးသွေးမှာ
ဒေါသကင်းသော (သို့ ) အ လောဘ ဒေါသ လုံးဝမရှိတဲ့သူ ရဲ့ သွေးဟာ
အဝါရောင် ရွှေရောင် ရှိတယ်လို့အဲ့လိုဖွင့်ဆိုတယ်
သူတို့ က အဲ့သည်လိုသွေးရှိတဲ့သူတွေ….ရွှေမျိုးတွေ
ဒါကတော့ အကျဉ်းခြုံ့ ပြီးပြောတာနော….
ဆဲရေးတိုင်ထွာတိုင်း လိုက်ပြီး မခံစားနေကြနဲ့ 
အောင်ပု ဘယ်လို ရှိခိုးတောင်းပန်တယ်ဆိုတာ သိလား
အောင်ပုဆဲတိုင်းလိုက်ဆဲကြစတမ်းဆို အောင်ပုစစ်ထဲဝင်ရင် လိုက်ဝင်ကြမလား
ဘုန်းကြီးဝတ်ပြီး လိပ်စာပေးလိုက်လို့နေ့ တိုင်းဆွမ်းလာပို့ နေရမယ်
မသိလို့ မေးပါရစေဘုရား။ ရွှေအ၊ ရွှေဘဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်ကို အခုမှကြားဖူးပါတယ်။ မလေးနဲ့ရရင် ရွှေမ၊ စင်္ကာပူဆိုရင် ရွှေစ၊ ဂျပန်နဲ့ဆို ရွှေဂ၊ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ဆို ရွှေဖါး၊ တရုတ်နဲ့ဆို ရွှေပေါက် ဆိုတာမျိုးတွေရော ရှိပါသလား။
ကိုခိုင် ပြောမှဘဲ မြန်မာငွေကြေး နမ်နှိမ်ထားတာသိတော့တယ်
ဥပမာ…၅ ကျပ် ၅၀ ပြား ကို ၅ ချောင် ၅၀ ဖေါင်း လို့ ပြောင်းရမယ်…
ရီလိုက်ရတာ အူနာလှပြီဗျိုး။ ကျွန်တော့်မှာ တစ်သောင်းချောင်ရှိတယ်။ ဖောင်းတော့ မရှိဘူး။
ဆူးရေ အိမ်ထောင်သားမွေးအကြောင်း ရေးတာ မဟုတ်ဘူးထင်တယ် .. အဓိက က အမျိုးဂုဏ်အကြောင်း နဲ့ ဘာသာခြားနဲ့ အကြောင်းပါသွားရင် ဘာသာခြားသွားလို့ အယူပျက်ပြီး အခြေမလှမှာ စိုးလို့ ဘုန်းဘုန်းက မိန့်ကြားတာလို့ ထင်ပါတယ် ..
ဒီလို စာရေးသူအာဘော်လေးသိပြီး အဓိပ္ပါယ်မိမှ ရေးပြရတာ အရသာရှိတယ်။ အကောင်ပြ အရိပ်တော့ ထင်အုံးမှ။